Iyo yakanakisa Spanish Linux distros | Kubva kuLinux
Iyo yakanakisa Spanish Linux distros
Mwedzi mishoma yapfuura takaita sarudzo ye akanakisa argentine Linux distros. Pane ino nguva, isu takasarudza akanakisa Spanish Linux distros achifunga nezve: kuenzanirana kwenzvimbo yekuparadzira, yekupedzisira kugadzirisa, mhando uye kupedzisa sisitimu, saizi yenharaunda yayo, nezvimwe.
1 Kuende (Gwenga)
6 GNULinEx (Kuwedzera)
7 MAX (Harare)
8 Linkat (Catalonia)
Trisquel GNU / Linux ishanduro yeGNU inoshanda sisitimu inoshandisa iyo Linux-yakasununguka kernel. Zvinangwa zvikuru zveprojekiti kugadzirwa kwemahara zvachose, nyore kushandisa, yakakwana sisitimu yekushandisa nerutsigiro rwemutauro wakanaka. Shanduro dzazvino dzinosanganisira shanduro dzeGalician, Chirungu, Spanish, Catalan, Basque, Chinese, French, Indian uye Portuguese mitauro.
Saiti yepamutemo: http://trisquel.info/
MoLinux ndiyo yepamutemo GNU / Linux kugoverwa kweCastilla-La Mancha Nharaunda Yenharaunda. MoLinux yakavakirwa paUbuntu. Mazita eimwe neimwe vhezheni mavara kubva kunoverengeka "Hunyanzvi hidalgo Don Quixote de la Mancha", naMiguel de Cervantes.
Iko kune zvakare minimalist vhezheni: Molinux Zero yakavakirwa Puppy Linux 4.2 uye inopa sezvishoma zvinodikanwa 166Mhz processor, 32Mb Ram + Swap (64Mb Yakakurudzirwa), CDROM + 20x drive uye hard disk. Pakati pezvinhu zvaro zvakakosha zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ine mhenyu vhezheni uye kuti inogona kuiswa nyore nyore paUSB, Zip uye Hard Drives.
Saiti yepamutemo: http://www.bilib.es/recursos/molinux/
ASLinux Desktop inowanikwa yeIntel uye AMD 32-bit CPUs, ine nzvimbo izere, yakagadzikana uye inonzwisisika inogonesa kupinda kweLinux uye inosanganisira zvese maficha anogona kushandiswa nemushandisi: hofisi otomatiki, Internet, multimedia, dzidzo, mitambo, nezvimwewo, pamwe nehurongwa hwakakwana hwekuchengetedza senge firewall yemunhu, Windows virus scanner, uye firita ye spam. ASLinux Desktop inosanganisa kusimba uye kugadzikana kweLinux, simba uye kuita kwakawanda kweDebian Sarge, uye hushamwari uye nyore kushandisa KDE. Pfungwa yake yakasimba ndiko kugona kwayo kukuru.
ASLinux Desktop inowanikwa senge yemahara kurodha pasi.1 Kune zvakare chinyorwa chebhokisi icho, kusvika kuiyo shanduro 2.0, chakapihwa sekuwedzera akateedzana emasevhisi epamberi emushandisi kuburikidza neASLinux portal, senge rutsigiro rwehunyanzvi, zvinyorwa uye kuwedzerwa software kurodha pasi. . Aya ese masevhisi parizvino anopiwa kune vese vashandisi mahara.
Saiti yepamutemo: http://www.activasistemas.com/index.php?id=7
Inoitwa nebazi redzidzo yeGeneralitat Valenciana, chinangwa chayo chikuru kuunza ruzivo rutsva uye matekinoroji ekutaurirana akavakirwa pasoftware yemahara muhurongwa hwedzidzo yeValencian Nharaunda. LliureX yakavakirwa paUbuntu, asi shanduro dzekare dzaive dzakavakirwa paDebian.
Inogoverwa mumitauro miviri yepamutemo yeValencian Nharaunda, Valencian neSpanish, uye nenzira mbiri: kuisa uye seyakamira yega CD (LiveCD).
Saiti yepamutemo: http://lliurex.net/home/
Guadalinex iko kugoverwa kweLinux kunosimudzirwa neJunta de Andalucía kukurudzira kushandiswa kwesoftware yemahara munharaunda yayo yakazvimiririra. Iyo yakafuridzirwa naGnuLinEx, chirongwa chakafanana neJunta de Extremadura. Pakutanga yaive yakavakirwa paDebian GNU / Linux nekuda kwechibvumirano chekutanga pakati peJunta de Andalucía neExtremadura, uye kubvira vhezheni 3.0 yakavakirwa paUbuntu.
Saiti yepamutemo: http://www.guadalinex.org/
gnuLinEx ndeye yemahara Linux kugovera kunobva paDebian GNU / Linux uye GNOME, iOpenOffice.org sehofisi suite, pakati pezvimwe zvinoshandiswa.
Inokurudzirwa neBazi reEconomy, Trade uye Innovation yeAutonomous Community yeExtremadura (Spain), iri piyona uye inotsigirwa nemamwe masangano eruzhinji neakazvimiririra muSpain yese. Kwenguva yakati rebei, nharaunda yeExtremadura yakapawo rutsigiro kunharaunda yeAndalusian (iyo yakafemerwa naGnuLinex kugadzira Guadalinex) mukumisikidzwa kwemhinduro dzakavhurika muzvikoro, manejimendi, nezvimwe.
Saiti yepamutemo: http://linex.gobex.es/
MAX kana MAdrid_LinuX ndiyo inoshanda sisitimu yakavakirwa paUbuntu (inovawo yakavakirwa paDebian GNU / Linux) yakagadzirwa neHurumende yeDzidzo yeCommunity yeMadrid. Kusvikira vhezheni yechipiri yaive yakavakirwa paKnoppix, inorarama CD kugovera kunobva paDebian GNU / Linux.
Iyi yekushandisa system inogona kushandiswa muLiveDVD modhi, uye inogona zvakare kuiswa pane rakaomarara diski. Kubva 2003, iyo MAX kugoverwa yakaiswa pane ese makomputa akaiswa neMadrid Regional Ministry of Education munzvimbo dzisiri-yunivhesiti nzvimbo dzekudzidzisa.
Inogoverwa kuburikidza neIO CD kana DVD mifananidzo, iyo yekupedzisira iri iyo "yepamutemo" vhezheni. Dhisiki iine kugovera kunosanganisira katatu yekumisikidza sarudzo, sezvo ichishandiswa kuisa mutengi nemaseva vhezheni, pamwe nekutendera kushomeka bootable kuisirwa pane USB inotakurika ndangariro. Iyo zvakare ine system inobvumidza yemahara software kunyorera kuti iiswe pane Microsoft Windows michina.
Saiti yepamutemo: http://www.educa2.madrid.org/web/max?c=an
Linkat ndiko kugoverwa kweGNU / Linux kweDhipatimendi reDzidzo yeGeneralitat yeCatalonia. Iyo yakavakirwa pane iyo OpenSUSE kugovera uye mashandiro ezvirongwa anoenderana ne rpm mapakeji. Izvozvi iri muchikamu 3.0 uye inoshandisa iyo Gnome desktop nharaunda nekutadza, kunyangwe iyo KDE uye XFCE nharaunda dziripo zvakare.
Saiti yepamutemo: http://linkat.xtec.cat/portal/index.php
Mimwe yakanaka distros ndeiyi: Kademar y Bardinux.
Ongorora: ivo vakasarudzika kubva pachinyorwa Catix, Nyamavhuvhu, gnUAMix, Lazarux, LineEspa, LU3CM, Melinux uye vamwe nekuti havana kugadziridzwa mumakore apfuura. Kuti uone runyoro ruzere rwevose veSpanish distros, ndinokurudzira kuti ushanyire Wikipedia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iyo yakanakisa Spanish Linux distros
Yakarasika kademar http://www.kademar.org/ uye Bardinux http://bardinux.ull.es/ uye zvirokwazvo takasiya vanopfuura mumwe.
Shinga Thd akadaro
Chokwadi, nekuti maCatalan zvakare maSpanish, kunyangwe kana vasingade
Pindura Kushinga Thd
Francesc Llort akadaro
Kugadziridza. Iyo Càtix yaizove iri pachinyorwa zvakare neshanduro yayo 1.7, yakavakirwa pawheezy. Chaizvoizvo, yakakwana, yatove kubva kune yake mhenyu cd.
Nenzira, chero maCatalan kana vamwe vari, rega mumwe nemumwe asarudze, kunyangwe iwe usingazvifarire.
Pindura kuna Francesc Llort
Munharaunda yese yenharaunda, kupinda kana kubuda kweimwe yevavakidzani vayo kunosarudzwa nevavakidzani vese. Kwete yako? . Kana iyo Aran Valley ichida rusununguko rweCatalonia, inogona kugadziriswa nevese veAranese vega kana vese maCatalan vachazvisarudza?
Kupinda hongu, kubuda kwete, kana kana iwe uchida kusiya nharaunda kuti unogara mune imwe furati, vavakidzani havangakubvumidze here nekuti unofanirwa kuvhota?
Ehe vanogona kuzvisarudzira vega.
Pindura kune lolbimbo
manuel manrique akadaro
Avo veCagagena vanoda kuve neyedu linux uye vazvimiririra.
Zvingave zviri: CartaLinux.
Zvingave zvakavakirwa paMurcilinux
Uye yaizove semutauro wakasarudzika El Panocho
Pindura manuel manrique
Heano imwe yakanaka distro muSpanish yakavakirwa paDebian kusvina:
Ehe ... Yakanaka kwazvo tb!
I 05/08/2011 23:18, «Disqus» <>
Pindura kune enyx
Uye Antergos?. Cinnarch yekare.
Ini ndinopa iyo distro yandiri kushandisa, Bugtraq, mune yayo Nhema Chirikadzi vhezheni. Kubva pane debian, ubuntu, uye open suse. Iko kune kusarudza kubva.
Kana zviri zvekuparadzirwa kwenyika, nei vasingabatanidze uye voita imwe yeSpain zvese? Zvingave zvakakwana kutsigira mitauro yakadai seCatalan, Spanish uye zvaizodzora mutengo wekuchengetedza kupihwa kuwedzera mukuita kuti kugamuchirwa nemagwaro zvive nyore.
Pindura kuna oyrad
Semunhu anoshandisa Linkat, ndinofanira kutaura kuti, nhasi, ruzivo nezve ino distro rwakasiyana neizvo zvinotsanangurwa pano. Kubva nhasi, Linkat yakavakirwa paUbuntu 12.04 LTS. Rumwe ruzivo runobatsira: Iyo desktop desktop ndeye GNOME 2 uye haishandise Kubatana.
Muunganidzwa wakanaka kwazvo, asi sekuziva kwangu, Bardinux haisi distro kubva kuCatalonia asi kubva kuTenerife, Canary Islands, yakagadzirwa neUniversity yeLaguna.
Pindura kuna apu314
ndangariro dzipi pandakashandisa guadalinex edu 10.04: 'D.
Mhoroi munhu wese, ini ndine Max 8 yakaiswa uye ndinoda kuisa Windows 10 futi, zvinoitwa sei? Kuti ndarasika zvachose, maita basa anondibatsira
Manuel Blanco Montero akadaro
Ndine makore gumi nemana Ndichishandisa = Linux Yakagadzirwa> muSpain Parizvino ini ndinoshandisa Max Linux 14 «Kubva kuVENEZUELA» KURATIDZWA KUSI SIPANISHI YOKUDZIDZA YEMAHARA YEMAHARA LINUX & KUVandudza SOFTWARELIBRE
Pindura Manuel Blanco Montero
Aptosid: inonakidza distro yakavakirwa pakuedzwa kweDebian
Ubuntu 8.04 LTS "Hardy Heron" haichazotsigirwi zviri pamutemo